စံဝင်းချို Daily Hope It Takes All Kinds of People
“ထိုဦးခေါင်းမှ၊ အဆစ်အပိုင်းများ တို့သည် အားဖြည့်သဖြင့်၊ တကိုယ်လုံးသည် စေ့စပ် ထုံးဖွဲ့လျက်၊ အသီးအသီးအင်္ဂါများ ကိုယ်ငန်းကိုယ်တာ အတိုင်း ပြုပြင်သည်နှင့်အညီ၊ မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌ တည်ဆောက်ခြင်းငှါ ကြီးပွားစေတတ်၏။” (ဧ ၄း၁၆)
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် သင်းအုပ်ဆရာ သို့မဟုတ် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပြုရန် ခေါင်းဆောင် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အသစ်သို့မဟုတ် ဤဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဖွင့်တာနှစ်အနည်းငယ်ရှိတာဖြစ်မည်၊ ဤအသင်းတော်တိုးတက်ကြီးပွါးရန်မှာ လူမျိုးပေါင်းစုံကိုဆောင်ယူရပါသည်။
သင်သည်သခ်ျာတော်သလား၊ အစီအစဉ်၊သို့မဟုတ် ခလေးများနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သလား? ဆိုင်းဘုတ် ဆေးသုတ် ဆေးရေး? ဤအရာအားလုံးသည်လိုအပ်ပါသည်။ သင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွက်ဘာအ ကူအညီ ပေးနိုင်မည် နည်း?
ကျွန်တော်နှင့် Kay , Saddleback Church စတုံးက၊ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတစ်ခုမှာ လူ ၁၅ ယောက်ဘဲရှိတယ် ပထမနှစ်ကုန်တော့ လူ ၆၀ လောက်ဖြစ်လာသည်။ ဤလူများသည် တရားဟောသူများ၊ဆရာများမဟုတ်ကြပါ၊ သူတို့သည်သာမန်လူများသာဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၁နှစ်မှာလဲဒီလူတွေဟာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ နှလုံးသားများဖြစ်လာကြသည်။ သူတို့ကိုမေးလျှင်၊ သူတို့၏စေတနာနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများသည်တန်ဖိုး ရှိကြသည်။ သူတို့ကလဲ ဟုတ်တယ်လို့ဖြေကြလိမ့်မည်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် တာဝန်အချို့ကိုထမ်းဆောင်ပေးခြင်းသည်၊ သေချာသလောက် အများဆုံးနှင့် အရာ ရောက်သော ကိစ္စများကို သင်၏အသက်တာတွင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသမျှ ကြာကြာခံနိုင်ရန်၊ သင်၏အလုပ်နှင့် ၀ါသနာတို့သည် ထာဝရရှိမည် မဟုတ်ပါ။လူမျိုးနှင့်အစိုးရများသည်လည်းထာဝရ မရပ်တည်နိုင်ကြပါ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ မိသားစုများသာ ထာဝရ ရှိကြမည်များဖြစ်ပါသည်။
ကျမ်းစာက “ညီအစ်ကိုတို့၊ အဘယ်သို့နည်း၊ သင်တို့စည်းဝေးကြသောအခါ၊ ဆာလံသီချင်းကို ရသောသူ၊ ဆုံးမသြ ဝါဒစကားကို ရသောသူ၊ အခြားသောဘာသာစကားကို ရသောသူ၊ ဗျာဒိတ်တော်ကိုရသောသူ၊ အနက်ဘော် ပြရာကို ရသောသူ၊ အသီးသီးရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို တည်ဆောက်ခြင်းအလိုငှါ စီရင်ကြလော့” (၁ကော ၁၄း၂၆)။ လူတိုင်းသည်မိမိပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောအရာများကို စားပွဲသို့ ယူဆောင်လာကြပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူတိုင်းသည် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါ။
သင်၏ ဘုရားသခင်ပေးထားသော လက်ဆောင်နှင့် စွမ်းရည်သည်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်လိုအပ်သည်။ သင်တက်နေသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် နှစ်ပေါင်းကြာပြီဖြစ်ခြင်ဖြစ်မည် သို့မဟုတ် အစဘဲရှိသေးသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအသစ်ဖြစ်ခြင်ဖြစ်မည်၊ သင်၏အထောက်အကူပြုသော အကြောင်းအချက်နှင့်ဆောင်ရွက်မှု သည် ဘာဖြစ်မည်နည်း?
Tuesday June 14, 2011 12:00 AM Posted by Rick Warren